Dowladda Somalia oo ka hortimid Warbixin ay soo saareen Guddigii IGAD – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Somalia oo ka hortimid Warbixin ay soo saareen Guddigii IGAD
Ardaan Yare 27 January 2021
Guddigii Urur Goboleedka IGAD u xil-saaray Dacwadii dowladda Federaalka Soomaaliya ka gudbisay Kenya ayaa soo saaray Warbixin iyo baaritaano ay sameeyeen, kadib markii ay socdaalo ku kala tageen labada dal.
Guddiga oo booqday xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegay in aysan soo arkin wax caddeyaya sheegashada dowladda ee ku aadan in Kenya Jabhad ay hubeysay ay joogaan meel ku dhow xuduudka labada dal, si ay weerar u soo qaadan.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Cismaan Abuukar Dubbe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Guddigii loo saaray Dacwada labada dal uu la saf-tay Kenya, isla markaana aysan si dhab ah u soo baarin arrinta.
Waxaa uu Wasiirka Warfaafinta la yaab ku tilmaamay Warbixinta ay soo saareen Guddiga IGAD u saartay Dacwada ay gudbisay Soomaaliya, isagoona ku eedeeyay Guddiga in ay dhex-dhexaad ka noqon labada dal oo Warbixin hal dhinac ah ay qaateen.
“Ma filayn in walaalkayagii yaraa uu naga hiilin doono, waxaan rajaynaynaa in ay Jabuuti ka noqon doonto arrintan, Jabbuuti waxa xoreeyey Soomaaliya” ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Dubbe oo Jabuuti ku eedeeyay inay la safatay Kenya.
Guddiga oo dorraad soo saaray warbixin ayaa sheegay in xuduuda aysan ku soo arkin wax cadeynaya sheegashada Soomaaliya ee ah in Kenya ay abaabuleyso Jabhad, sidoo kalena kusoo xad-gudubtay.
Si kastaba dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xiriirka u jarta Kenya, isla markaana ku eedeysay inay kusoo xad-gudubtay Madaxbanaanida dalka, sidoo kalena soo fara-gelisay Arrimaha Siyaasadda dalka, waxaana dowladda ay gudbisay Dacwda ka dhan ah dalkaas.